စကားပြောရောဂါဗေဒ SLP – မြန်မာစာ – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
ငါ့မှာ slp ဘွဲ့ရရှိပြီး၊ အနာဂတ်မှာ စပီကာဖြစ်ဖို့၊ လှိုင်းအလျားတစ်ခုဖြစ်ဖို့၊ ရိုးရှင်းတဲ့ကုထုံးဖြစ်ဖို့က အရေးမကြီးတော့ဘူး။ တစ်ခါက ဆရာဝန်တစ်ယောက်မှာ အော်တစ်ဇင်ဖြစ်ဖူးပြီး သူ့အပြောအဆို ရောဂါဗေဒကို ဖွင့်တယ်။
ဤ SLP Speech Path Sound Sticker ကို သင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
1. လှိုင်းအလျားအတွက် တိုင်းတာသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူနစ်သည် တစ်မီလီမီတာ၏ တစ်သန်းပုံတစ်ပုံ၏ တစ်ပုံတစ်ပုံနှင့် ညီမျှသည်။
လှိုင်းအလျားအတွက် တိုင်းတာခြင်းယူနစ်၊ မိုက်ခရိုန၏ 1/10000 နှင့်ညီသော ကွဲလွဲချက်၊
comment သင်္ကေတ Å
cf. ပြင်သစ်ဘာသာစကား angström။
cf. Angström – ဆွီဒင် ရူပဗေဒပညာရှင်။
Tags:2tonedjslpslp gradslp ဖြစ်ရမယ်။slp ဘွဲ့ရကျောက်ဆောင်လိုခိုင်မာသောကုထုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းဂစ်တာဂျမေကာဂီတဂီတပညာရှင်စကားပြောကုထုံးစကားပြောနည်းစကားပြောဖြစ်လာစေတယ်။စကားပြောဘာသာစကားစုပေါင်းဝိညာဉ်တီးဝိုင်းတူရိယာနည်းပညာနှလုံးပန့်ခ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပွဲတော်ပါတီရက်ဂေးရယ်စရာရိုက်တယ်။ရောဂါဗေဒပညာရှင်လှိုင်းလှိုင်းအလျားသင်္ကေတသွေးခုန်နှုန်းအကအကြိမ်ရေအချစ်အနက်ရောင်အနာဂတ် slpအမည်းရောင်အသံအသံပညာအသံလှိုင်းအေးတယ်။အော်တစ်ဇင်
Next SLP – Zvučna naljepnica bosanskog govora
Previous Налепка маўленчая паталогія СЛП – бел